Daahan - Changzhou longxin Makiinado Co., Ltd
Daahan waa film joogto ah oo la dahaarka dushiisa of shay la ilaaliyo ama lagu qurxiyey oo lagu adag ku lifaaqan karaan in ay daahan. Waa dareere culus, sida caadiga ah laga sameeyey oo dumin kara, saliid, iyo emulsion leh ama aan lahayn pigments, buuxiyo, lagu daro, qase organic ama biyo.
Ka dib muddo dheer oo horumarineed, daahan gaar ah oo adag. Si hadaba loogu sahlo maaraynta iyo adeegsiga, hababka kala soocidda kala duwan ee blaastiigga la sameeyey oo leh sifooyin gaar ah. Waqtigan xaadirka ah, inta badan qaatay soocidda daahan waa sida soo socota:
Sida laga soo xigtay cayn oo isku darsan film-sameynta, daahan loo qaybin karaa daahan alkyd dumin kara, daahan polyurethane, daahan emulsion, nitrolacquer, daahan looxa, epoxy daahan dumin kara, iwm
Sida laga soo xigtay isticmaalka kala duwan, waxaa loo qaybin karaa xamuurada rinji, xamuurada qoryo, daahan baabuurta, rinjiga baabuurta, rinjiga badda, daahan galaas, daahan steel, iwm
Sida laga soo xigtay hababka kala duwan lagu qalajiyo, waxaa loo qaybin karaa rinjiga hawada-qalajiyo, stoving varnish, UV daahan Asagoo arigtadaa ka, iwm
Sida laga soo xigtay foomka dahaadhka, waxa loo qaybin karaa daahan budo, daahan dareere ah.
Sida laga soo xigtay shaqada daahan, waxaa loo qaybin karaa qabashada rinjiga, qalabada rinjiga, rinjiga anti-miridhku, rinjiga kulaylka u adkaysta, iwm
Longxin siiyaan qalab badan oo soo saaridda daahan sida AkzoNobel, MAYDOS, rinjiga Nippon iyo wixii la mid ah.
Talinaynaa qalabka wax soo saarka daahan: YS taxane Haydarooliga saddex dhagax duuban, ee caadiga taxane siman gudaha-qaboojinta dhagax kuusha shaqayn buuxda, taxane tahayna dhagax ciid socodka degdeg ah, taxane WSS siman iyo dhagax, taxane WSK superfine High-nafwaayay dhagax kuusha wejiyo
Line Product: daahan / farmashiyaha / line wax soo saarka / buufiyo cayayaanka